ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၄)
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၄)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Oct 1, 2012 in Photography | 25 comments
တင်မယ် တင်မယ်နဲ့ ဘီဇီးနေတာကြောင့် မတင်ဖြစ် ဘူးဖြစ်နေတယ်.. ကြားထဲ မိုးပြာ အခန်းဆက်လဲ ထည့်မလို့ အစမှာ တင် ကိုကိုဟက်ကာ တွေကြောင့် အာရုံပြောင်းသွားတာကြောင့် အခန်းဆက်ကို ဆက်မတင်ဖြစ် တော့ပါဘူး.. ခုတော့ အော်ရီဂျင်နယ် ဂန္ဓာရီခရီး ကိုပဲ ပြန်ဆက်တာပေါ့ဗျာ..
အခုပွဲလေးကတော့ ပုဂံ၊ မြင်းကပါမှာ ၂၉.၉.၂၀၁၂ မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မနူဟာ အရုပ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်.. နှစ်စဉ် တော်သီလင်းလပြည့် နေ့မှာ ကျင်းပပါတယ်.. ထူးခြားတာက လှည့်လည်ပြသတဲ့ အရုပ်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်.. အရုပ်တွေကို မြင်းကပါ ရွားသားတွေကိုယ် တိုင် ပြုလုပ် ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီ အရုပ်ချိုးတဲ့ အတတ်ပညာကို မြင်းကပါမှာ ကလေးကအစ တတ်မြောက်ပါတယ်.. ဘုန်ကြီးကျောင်း တွေ အပါအ၀င် ရွာ အပိုင်း လိုက် အရုပ်တစ်ခုစီ ပြုလုပ်ကြပြီး ကပြကြတာ ဖြစ်ပါတယ်.. ကိုကြီးကျော်ရုပ်.. မြင်းရုပ်.. ကျွဲရုပ်.. စတာတွေပါဝင်ကြပြီး ပါဖော့မန့် ပြကွက်တွေ လဲပါ ပါတယ်.. ပါဖော့မန့် တွေလုပ်၊ အရုပ်မှာ စာတွေရေးကြပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့ နည်းတမျိုးလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီနှစ်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ် နဲ့ အန်တီစု အရုပ်တွေ ပါဝင်လာပါတယ်..
အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က လာရောက်ကြည့်ရှုကြသူတွေလည်း များပြားပြီး အတော်စည်ကား လှပါတယ်.. အရုပ်တွေက စက္ကူချိုးထားတဲ့ အရုပ်တွေ ဖြစ်ပြီး လက်ရာမြောက်ပါ တယ်.. အထဲမှာ လူဝင်ပြီးကပြပြီး.. မတူတာက အရုပ်တွေက အောက်ပိုင်းမပါ ပါဘူး.. ကိုယ်တစ်ဝက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.. အရုပ်တွေနဲ့ လိုက်ပြီး တွန်းကြ တိုက်ကြလဲလုပ်တာကြောင့် အရုပ်နားသွားနေရင်တော့ အတိုက်ခံရမှာပါပဲ.. တစ်ချို့ အရုပ်တွေကတော့ တွန်းတိုက် တာနဲ့ ကျိုးကြေသွားကြပါတယ်.. ကျွဲရုပ်တွေ၊ ကျားရုပ်တွေဆိုရင် ဘေးကလူတွေကို လိုက်တိုက်ပါတယ်.. အံ့သြစရာက အဲလို တွန်းတိုက်ကြပေမယ့် စိတ်မဆိုး၊ ရန်မဖြစ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
သွားရောက်ကြည့်ရှုချင်ကြတယ် ဆိုရင်တော့ နှစ်စဉ် တော်သီလင်းလပြည့် နေ့မတိုင်ခင် တစရက် အလိုသွားရင်ရပါတယ်.. နေရာက မြင်းကပါရွာ မနူဟာ ဘုရား ရှေ ဖြစ်ပါတယ်.. အချိန်က ၂ နာရီ လောက်ကစပြီး ၄ နာရီလောက်ပြီးပါတယ်..
မနူဟာအရုပ်ပွဲရဲ့ ဓာတ်သေတွေကို ရွာသားတွေ ကြည့်ရှုနိုင်အောင် အတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်..
ငရုတ်သီးပိုးက ငရုတ်သီးထဲမှာပဲရှိတာ် ဆိုတဲ့ အရုပ်
ဈေးသည်နောက်ကျောမှာရေးထားတဲ့ စာက “simcard 5000 ks.. ငွေဖြည့်ကတ်မဟုတ်” တဲ့
ဖွားဖွား တို့လဲ စိတ်ဝင်တစား
ကျားဆွဲခံရတဲ့မစာဥ နဲ့ မင်းကြီး၊ မင်းလေး
ခုန်ပေါက်နေတဲ့ ကျားပေါ်မှာ မကြောက်မရွံ့
ဓားလေးတွေ တ၀င့်ဝင့်နဲ့ ချစ်စရာ မင်းကြီး၊ မင်းလေး
မင်းကြီး၊ မင်းလေး တို့မောနေမှာစိုးလို့
စာရေးတာမှားသွားလို့ပါ ပထမဆုံးပုံက“ မြစေတီအရုပ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကအရုပ်” ဖြစ်ပါတယ်
sorry “ မြစေတီဘုန်းကြီးကျောင်းကအရုပ်”
ရိုက်ပွဲမှာ မပါတာတော့ နာတယ်
ဒါနဲ့ အဖြူကတမျိုး..အနီကတမျိုး ပုံလေးတွေထက်.
နံမည်ကြီးလှတဲ့ မြင်းကပါ က
ဒါထက် ပါးကွက်ကြားနဲ့ အနီမလေး
ဆာအုပ် မိုက်တယ်ဗျာ……… တောင်ပြုံးပွဲနဲ. ကင်းကွာနေတာ ၆နှစ်လောက်ကိုရှိရောပေါ့…… အခုလိုလေးရိုက်ပြပေးတော့ ကျေးဇူးဗျာ………
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ ဒီ က အုပ် ဆိုတဲ့ စကားလုံး ပါနေလို.ကို အားပေးပြီးသား ဟိဟိ
ဆယ်အိမ်မူး ပေါက်ကရပြောဘီ ဗျ..
ပုဂံမြင်းကပါ ဆိုကာမှ..ဘယ့်နှာ တောင်ပြုံးပွဲ ကပါလာသဒုန်းးးး
တော်ကြာ..ဆြာအုပ်က ခင်ဗျားကို အုပ်ထဲ့ပေးနေအုန်းမယ်…
အာသိပါဒယ် ဗျ……….. ကျုပ်ရောက်ဖူးတဲ့ မင်းကြီးမင်းလေး အရုပ်ကလေးကို သွားတွေ.လို.ပါ ဗျာ….
~ဆရာ ကျွန်တော် မွှားတာချိရင် တောင်းရော ဇကောရော ပန် ပါတယ်ဗျာ……..
ဖွားဖွားတို့လည်း စိတ်ဝင်စားဆိုတဲ့ ပုံက ဖွားဖွား မဟုတ်လောက်ဖူး။ ဖိုးဖိုးဖြစ်ဖို့ များတယ် ။ မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေနဲ့လေ ဆရာအုပ် ။
အဖြူအနီတွေ နဲ့များ ရောသွားသလား
အင်း.. ဟုတ်သဗျ.. မုတ်ဆိတ်မွှေးပါတယ် .. ဟိ..
ကျမတို့မြို့မှာလည်း ကျောင်းကြီးကထိန်လှည့်ရင် အဲဒီလို အရုပ်ပဒေသာပင်တွေလုပ်တယ်။
သူကြီးတို့ လော့ကျတဲ့အိန် မှာ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်ဆိုရင် Rose Parade လုပ်တဲ့အခါ နှင်းဆီတွေနဲ့ အရုပ်အမျိုးမျိုး ကားအလှပြအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီး မြို့ကို လှည့်ပြတယ်တဲ့။
အမေဒစ်ကန် သဂျီးကို အားကျမခံကြွားပြလိုက်ပြီ။
ရွှင်မြူးစရာ နှစ်လိုဘွယ်ရာ ရသမျိုးလဲ ပေးတယ်
တော်တော်ကောင်းတဲ့ ပိုစ့် လေးပဲ…။
ဘာလုပ်နေတာလဲဟင်…. ?? :D
လွင်တီးခေါင် ဟုတ်ဘူးဂျ.. ပြဿဒါးဘုရားမှာ
ကျုပ်လဲဒီပွဲအကြောင်းကို ဆြာအုပ်စိုးကောင်းမှုကြောင့် ပထမဆုံး မြင်ရ သိရတယ်ဗျ
နေမျက်မှန်နဲ့ အဖွားကြီးပုံ မိုက်တယ်
ဘူလဲဗျ.. ဆြာအုပ်စိုး ဆိုတာ
အောက်ပြည်အောက်ရွာမှာတော့ ကထိန်ရာသီ မှာထိန်ခင်းတဲ့အခါ
နေမျက်မှန်နဲ့ အဖွားကြီးပုံ မိုက်တယ်…
ကိုပေ ဘယ်ကထွက်လာသလဲ.. ဟင်င်… :?
ဆြာအုပ်စိုး တဲ့ …
အူးလေးက မင်းအုပ်စိုး လား ဟင်င်င်င်င်င်င်င်င်င်
ဒီလိုအရုပ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတာအရင်က မကြားခဲ့ဖူးပါဘူး..ဆြာအုပ် ကျေးဇူးကြောင့် သိရ,မြင်ရပြီ.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..နောက်ဆုံးက အရုပ်ကတော့ တော်ရုံတွန်းတိုက်ရုံနဲ့ ကျိုးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး.. :p
အခုမှ သတိရလို့ ပြန်လာပြောတယ်ဗျား
ရှေ့ လျှောက် ဘုရားပွဲရာသီဆိုတော့ ပုဂံ ညောင်ဦးမှာ ပွဲတွေ နဲ့ စည်ကားဦးမှာ ပျော်စရာကြီးဗျို့ 
အလိုတော်ပြည့် ဘုရားပွဲ ချိန် တစ်ခါ ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်
အလိုတော်ပြည့်ဘုရားပွဲတော်ကို လာတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေ ချောချက် လှချက်ကတော့ တစ်ကယ်ကို စံပါ
နောက်ပြီး ရှိသေးတယ် ပုဂံညောင်ဦးသူတွေ ကို ကြည့်လိုက်ရင် အားလုံးနီးပါး အသားဖြူကြတယ် ချောကြတယ်ဗျို့ 
ရှေ့ လျှောက် ပုဂံညောင်ဦးသူလေးတွေရဲ့ အလှဓါတ်ပုံမျာကို ဆြာအုပ် ကောင်းမှု နဲ့ ကြည့်ရသေးတာပ
ကမန်းကတန်းဖြစ်သွားလို့ ရိုက်ဖို့ မေ့လာတယ် ကိုပေ ရေ
နောက်တစ်ခါ မေ့မလာစေရဘူး စိတ်ချ
ဆြာအုပ် ဆိုလို့ ခပ်ချောချောဂျီး ဖစ်မယ်ထင်ဒါ ..
ခုတော့ မဲမဲတူးတူးဂျီး ဖစ်နေဒါဂိုး …
ခုမှ အပိုင်း(၅) ကိုကြည့်မိပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ အရင်ပို့စ်တွေကို ပြန်ရှာပြီး ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်… ကျွန်မ မသိတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် သေချာကြည့်ပြီး မှတ်သွားပါတယ်။